Guardiola oo ka codsaday maamulka Man City inay la soo saxiixdaan xiddig horey uga tirsanaa kooxda AC Milan – Gool FM
(Manchester) 04 Maarso 2021. Fabrizio Romano ayaa u sheegay shabakada “Sky Sports” in in Manchester City ay jeclaan laheyd inay qandaraas la gasho Manuel Locatelli oo khadka dhexe uga ciyaari jiray kooxda AC Milan, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Manuel Locatelli oo 23 jir ah ayaa ka qalin jabiyay Akadeemiyada kooxda AC Milan, waxaana loo dallacsiiyay kooxda koowaad sanadkii 2016, wuxuuna soo bandhigay heerar wanaagsan.
Locatelli ayaa amaah hal xilli ciyaareed ah ku dhaqaaqay xagaagii 2018, kaddib Sassuolo ayaa si kama dambeys ah kula wareegtay saxiixiisa xagaagii 2019 qiimo dhan 12.5 million euros.
Kaddib si toos ah ayuu ugu biiray kooxda Sassuolo, da’ayarka reer Talyaani ayaa heerar fiican ku sameeyay kooxdiisa, isagoo ku qasbay tababaraha xulka Italy ee Roberto Mancini, inuu u yeero si uu u matalo maaliyada Azzurri.
Weriyahan ayaa tilmaamay in tababaraha haatan ee kooxda Man City Pep Guardiola uu ka codsaday maamulka City inay la soo wareegaan Manuel Locatelli xagaaga soo aadan.
Wariyahan caanka ah ayaa wuxuu intaas ku daray in Manchester City ay horay u xiiseyneysay qandaraaska Manuel Locatelli, isla markaana suuqa xagaaga ay maamulka isku dayi doonaan inay heshiis la gaaraan Sassuolo si ay ugu guuleystaan adeega da’ayarka reer Talyaani.
Waxaa xusid mudan in heshiiska Manuel Locatelli ee Sassuolo uu dhamaan doono xagaaga 2023.